Microsoft inoburitsa yakawedzera yekuvandudza ye Windows 10 Anniversary uye Vagadziri Gadziridza vashandisi
Microsoft nhasi yaburitsa OS Vaka 14393.2214 uye OS Vaka 15063.1058 kusvika Windows 10 Anniversary Kwidziridzo (Windows 10 Shanduro 1607) uye Windows 10 Vakagadziri Gadziridza (Windows 10 Vhezheni 1703) vashandisi zvichiteerana. Aya ekuwedzera ekuwedzera haasanganisi chero maficha, asi anosanganisira akati wandei ekugadzirisa. Tsvaga iro rakazara shanduko diki pazasi.
Kubvumbi 17, 2018-KB4093117 (OS Vaka 15063.1058):
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa Microsoft Edge kuti irege kushanda mushure memasekonzi mashoma kana uchimhanyisa mutemo wekurambidza software.
Inogadzirisa nyaya panoparidzirwa AppLocker muparidzi mitemo kune maMSI mafaera asingaenderane nemafaira nenzira.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa maMicrosoft uye Azure Active Directory maakaundi kuti agamuchire password kukurumidza kakawanda panzvimbo kamwe chete
Inogadzirisa nyaya inodzivirira Windows Mhoro kubva mukugadzira makiyi akanaka kana ichinge yaona isina kusimba macryptographic makiyi nekuda kweTPM firmware nyaya. Iyi nyaya inoitika chete kana mutemo wekuda iyo TPM yakagadziriswa.
Inogadzirisa nyaya inotadzisa vashandisi kuvhura chikamu chavo uye iyo dzimwe nguva inoratidza isiriyo [Email akadzivirira] ruzivo pane iyo logon skrini apo vashandisi vazhinji pavanopinda pamushini vachishandisa nekukurumidza mushandisi switching. Zvikurukuru, izvi zvinoitika kana vashandisi vari kutema matanda kubva kumatunhu akasiyana siyana, vari kushandisa iyo UPN fomati yemazita avo echiratidzo ([Email akadzivirira]), uye vari kuchinja pakati pevashandisi nekukurumidza mushandisi switching.
Inogadzirisa nyaya ine chekuita neye smart makadhi ayo anotendera maPIN kana biometric kupinda. Kana mushandisi akapinda isiriyo PIN kana biometric yekuisa (semuenzaniso, chigunwe chemunwe), kukanganisa kunoonekwa, uye mushandisi anofanira kumirira anosvika masekondi makumi matatu. Neshanduko iyi, kunonoka kwemasekonzi makumi matatu hakuchadiwe.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti browser rikurumidze kuzivikanwa kazhinji panzvimbo peye kamwe chete kana uchishandisa iyo Office Chrome yekuwedzera.
Inowedzera hushoma urefu hwepassword muGroup Policy kune mavara makumi maviri.
Inogadzirisa nyaya inoratidza zvisirizvo zita-rekumanikidza ruzivo kana uchiratidza chitupa zvivakwa. Panzvimbo pekuburitsa rakarongeka dhata, ruzivo rwunoratidzwa mune hexadecimal fomati.
Inogadzirisa nyaya inovharira yakatadza kutendeseka kweNTLM pachinzvimbo chekungovanyora chete kana uchishandisa mutemo wechokwadi nemhando yekuongorora yakavhurwa. Netlogon.log inogona kuratidza zvinotevera:
SamLogon: Transitive Network logon of <domain><user> from <machine2> (via <machine1>) Entered
SamLogon: Transitive Network logon of <domain><user> from <machine2> (via <machine1>) Returns 0xC0000413
Inogadzirisa nyaya inogadzira chitupa chekusimbisa chikanganiso 0x800B0109 (CERT_E_UNTRUSTEDROOT) kubva http.sys.
Inogadzirisa nyaya uko iko kurudyi-tinya mamiriro mamiriro ekunyorwa uye kudonhedza mafaera uchishandisa Windows Explorer haipo.
Inogadzirisa nyaya inomisa BitLocker kana Chidimbu Chishandiso panguva yekunyoreswa kwechigadzirwa panzvimbo pekuchengeta iyo mota yakadzivirirwa.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzeresa maCentennial maapplication kuvharira kugona kumisikidza mitezo-yemwero makota eNTFS.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti yekubatanidza bar isipo muVirtual Machine Connection (VMConnect) kana uchishandisa yakazara-screen mode pane akawanda monitors.
Inogadzirisa nyaya iko kushandisa GPO logon script yekumhanyisa network network inotadza kana mushandisi akabvisa kubva kunetiweki otangazve. Kana mushandisi akapinda mukati zvakare, iyo mepu dhiraivha haiwanikwe. Iyi nyaya inoitika kunyangwe iyo logon script ine yekushingirira mureza wakaiswa kune CHOKWADI.
Inogadzirisa nyaya inogona kukonzeresa kuti mamwe mafaera asvetuke uye anogona kugadzira zvakapetwa mafaira munzvimbo dzeBasa Folda panguva yakazara yekufungidzira sync zvikamu.
Inogadzirisa nyaya inoitika kana Vhoriyamu Shadow Kopi inogoneswa pane vhoriyamu inobata iyo faira mugove. Kana mutengi achiwana iyo UNC nzira yekutarisa zvivakwa muiyo yapfuura Shanduro tebhu, iyo Date Modified munda hauna chinhu.
Inogadzirisa nyaya inoitika kana mushandisi aine anofamba-famba mushandisi profiles anotanga kupinda pamushini unomhanya Windows 10, vhezheni 1607, uye vozodzima. Gare gare, kana mushandisi akaedza kupinda pamushini unomhanya Windows 10, vhezheni 1703, uye inovhura Microsoft Edge, Microsoft Edge inomira kushanda.
Inogadzirisa nyaya yekuvimbika neInternet Explorer painopinda mameseji muRichEditText control.
Kero inokwanisa kudonhedza inokonzerwa nekuvhura nekuvhara iyo nyowani webhu bhurawuza.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kuti ContentIndexter.AddAsync API kukanda zvisina basa kunze.
Kubvumbi 17, 2018-KB4093120 (OS Vaka 14393.2214):
Inogadzirisa nyaya mumapurogiramu anoitika kana uchishandisa iyo IME yeJapan.
Inogadzirisa nyaya inoratidza zita-rekumanikidza ruzivo zvisirizvo kana uchiratidza chitupa zvivakwa. Panzvimbo pekuburitsa rakarongeka dhata, ruzivo rwunoratidzwa mune hexadecimal fomati.
Inogadzirisa nyaya inodzivirira zvikamu zveReFS kubva pakuwedzeredzwa kana vhoriyamu yakatanga kuumbwa uchishandisa ReFS v1.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo inomirira Hyper-V node kumira kushanda painotanga iyo yakagamuchirwa VM.
Inotaura nezveKernel deadlock iyo inokanganisa kuwanikwa kweserver.
Inogadzirisa nyaya ne Windows Kwidziridzo inodzivirira maVM kubva pakuponeswa mushure mekutanga kana kudzima komputa mushure mekushandisa yekuvandudza. vmms.exe haimiriri vmwp.exe kupedzisa kuteedzera VM memory data.
Inogadzirisa nyaya umo DTC inomira kupindura mu msdtcprx! CIConnSink :: SendReceiveive panguva yekudzoka kweXA. Panguva yekundikana uku, zvinhu zveXaMapper zvine maRMID akafanana zvakaora.
Inogadzirisa nyaya inokutadzisa kubva kugadzirisa kana kudzoreredza Dhairekitori zvinhu izvo zvisina kukodzera backlink hunhu hwakazara mukirasi yavo. Iko kukanganisa kwaunogamuchira ndekwekuti, "Kanganiso 0x207D Kuedza kwakaitwa kuchinjisa chinhu kuti chiise hunhu husiri pamutemo hwekirasi yacho."
Inogadzirisa isingabvumirwe tens token yekusimbisa nyaya. Inogadzira kukanganisa kunotevera: "Microsoft.IdentityServer.Web.Protocols.OAuth.Exceptions.OAuthInvalidRefreshTokenException: MSIS9312: Yakagamuchirwa isiriyo OAuth chiratidzo chekuzorodza. Chiratidzo chekuzorodza chakatambirwa nguva yakadarika pane yakabvumidzwa nguva muchiratidzo. ”
Inogadzirisa nyaya inodzivirira ADDS DSAC kubva kumhanya kune mutengi iyo ine PowerShell Transcripting inogoneswa. Iko kukanganisa kunotevera kunoonekwa: "Haigone kubatana kune chero duraini. Zorodza kana kuti edza zvakare kana kubatana kuchinge kwavepo. ”
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa kukanganisa kweNFS server cluster zviwanikwa kutora nguva yakareba kana kutaurirana kubva kuseva yeNFS kuenda kumutengi weNFS kwakavharwa. Kana iyo failover ikatora anopfuura maminetsi makumi maviri, mira kukanganisa 20x0E (USER_MODE_HEALTH_MONITOR) inoitika.
Inogadzirisa nyaya inogona kuburitsa inokwenenzvera yekuchengetedza kukanganisa yambiro panguva yekusimbisa kwesumbu kana ichimhanya iyo Debug-KuchengetedzaSubSystem cmdlet kunyangwe hazvo huwandu hwakakwana hwakachengetedzwa chaizvo. Yambiro ndeyekuti "Dziva rekuchengetera harina hushoma hwakakurudzirwa hwekuchengetedza nzvimbo. "Izvi zvinogona kudzikisira kugona kwako kudzoreredza kudzoreredza dhata mune izvo zviitiko zvekutyaira (s)."
Inogadzirisa nyaya mu Windows Multipoint Server 2016 inogona kuburitsa iko kukanganisa "Iyo MultiPoint sevhisi haisi kupindura pamushini uyu. Kugadzirisa nyaya edza kutangazve muchina. ”
Inogadzirisa nyaya inodzivirira iyo UDP profil kubva kurodha pasi. Uku kutadza kutakura kunogadzira kukanganisa "Hatigone kusaina muaccount yako", uye vashandisi vanogamuchira chimiro chenguva pfupi.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa iyo yemhando yepamusoro theme kuisa kuti ishandiswe zvisirizvo kana mushandisi akapinda mukushandisa RDP.
Inogadzirisa nyaya inokonzeresa pairing dambudziko kune yakaderera-simba maBluetooth michina.
Inogadzirisa nyaya yekuvimbika neMicrosoft Outlook.
Inogadzirisa nyaya yekuvimbika inoitika uchisundidzira iyo Alt kiyi kana uchishandisa Microsoft Office application yakachengetwa mumudziyo weAlexX.
Kunobva: Microsoft (1), (2)
Kubudiswa kweMicrosoft Windows 10 Kuwedzera Kuwedzeredza KB4571744 ine disk manejimendi gadziriso
Microsoft bvisa KB4535996 ye Windows 10 Chivabvu 2019 naNovember 2019 Kwidziridzwa nekuvandudzwa kwebhatiri, zvimwe
Microsoft inoburitsa Yakawedzera Kuwedzeredza KB4586853 ku Windows 10 Windows 10 20H2 uye 2004
Microsoft inoburitsa Yakawedzera Kuwedzeredza KB5000842 ye Windows 10 20H2 uye 2004
Windows 10 Inovaka 19041.662 uye 19042.662 (KB4586853) Kunze kweV20H2 uye v2004
Filed Under: "ど の ド メ ン ン に 接" "" ""